Ciidanka bilayska ee caasimada Garoowe oo soo bandhigay hub fudud oo ay ku qabteen dad la marayey gudaha magaalada. – Radio Daljir
Ciidanka bilayska ee caasimada Garoowe oo soo bandhigay hub fudud oo ay ku qabteen dad la marayey gudaha magaalada.
Maajo 13, 2011 12:00 b 0
Garowe, May 13 – Ciidanka bilayska ee magaalada garoowe ayaa soo bandhigay cadad hub fudud ah oo ay ku soo qabteen hawgallo balaaran oo lagula dagaalamayay ku qaadashada hubka sharci daradaa gudaha magaalada Garowe.
Tirada hubka ah ee la soo bandhigay ayaa waxay kala ahaayeeyn labo qori oo ah nuuca Soomaalidu u taqaano AK-47 oo lagu qatay dad ku dhexsitay magaalada; waxaana sidoo kale la soo bandhigay toorayo, iyo qunbulad nuuca gacanta laga tuuro ah, iyo mobile gacanta lagu qaato oo dhamaam ay ciidamada ku soo qabteen hawgallada ka socda magaalada Garoowe.
Taliye ku xigeenka ciidanka bilayska ee gobolka Nugaal G/Sare Maxamed Jaamac Cali ‘Heeryo’ oo idaacada Daljir kula hadlay goobta lagu soo bandhigayay hubka ayaa shaaca ka qaaaday in ciidamada bilayska ay ka qabteen hawgallo u soorto galiyay in ay gacanta ku soo dhigaan hub sharci dara ah oo lagu dhex sitay gudaha magaalada, waxaana taliyaha uu tilmaam dheer ka bixiyay qaabka ciimada amnigu u wadaan hawgallada amni sugidda ee lagula dagaalamayo kooxaha fallaka amni dari ka wada magaalada Garoowe.
G/Sare Heeryo waxaa uu digniin u diray baabuurta isticmaasha xirashada aaladda beensalka, isaga oo hoosta ka xariiqay in tilaabo cad laga qaadi doono cidii lagu arko iyadoo isticmaalaysa xirashada aalada beensalka.
Hawlgalladu waxaa ay ku raad-joogaan awaamir dhawaan ka soo baxay dawlada Puntland oo mamnuucaya qaadashada hubka fudud ee magaalooyinka, lana faray dhammaan madaxda iyo maamullada gobolladu in ay hirgaliyaan. Hawlgallo kan la mid ah ayaan in dhawaale ka socday magaalooyinka Bossaso iyo Galkacyo.
C/ Wali Maxamed Sheekh.
Ciidamada dowladda oo dagaalka Gedo ku qabtay maxaabiis ka tirsan Al-shabaab.
Isleged, Guddoomiyaha goblka Sool ee Somaliland oo ka badbaaday isku day dil.